အန်ဒါမန်ဟီးရိုး: May 2008
there wasacertain man.. In Burma long ago ...
Posted by Andaman Hero at 6:44 PM0comments
Yebaw Day's Cartoon
who is next ?????
Posted by Andaman Hero at 6:25 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 6:13 PM0comments
Another idea of Mr.Creator
Posted by Andaman Hero at 5:53 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 5:48 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 5:43 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 5:40 PM0comments
Ban Ki Moon Puors Water InaBroken Jar
Posted by Andaman Hero at 5:31 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 2:12 PM0comments
ှထိုင်းနိုင်ငံ၊တာခ်ခရိုင်၊မဲဆောက်မြို့ ကနေလေဘေးကယ်ဆယ်ေ၇းကပစ္စည်းကားအစီး ၄၀ နဲ့ နောက်တကြိမ်လှူ
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊မေလ ၂၈ ရက်နေ့ က၊ထိုင်းနိုင်ငံ၊တာခ်ခရိုင်ဝန် ဦးစီးပြီးတော့၊ကားအစီး ၄၀ နဲ့ လေဘေးကယ်ဆယ်ရေး ပစ္စည်းတွေကိုမြ၀တီ၊ခယက၊ကတဆင့်သွားလှူတဲ့အခန်းအနားမှာ၊တာခ်ခရိုင်ဝန်ကမြန်မာလေဘေးဒုက္ခသည်တွေပုံမှန်အနေအထားပြန်ရောက်တဲ့အချိန်အထိလှူတန်းနေမယ်လို့ပြောကြားသွားသည်၊
၁၈ နှစ်မြောက် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ပတ်လည်အခန်းအနားကို MPU ကထိုင်း၊မြန်မာနယ်စပ်မှာဒီနေ့ ကျင်းပ
Posted by Andaman Hero at 6:37 PM0comments
Voice of Nargis victims from Dagon north
Posted by Andaman Hero at 7:42 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 7:08 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 7:05 PM0comments
Posted by Andaman Hero at 6:55 PM0comments
နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကိုနှောင့်နှေးအောင်လုပ်နေတဲ့၊နအဖရေ၊ကျုပ်တို့ တော့၊ဆန်ပြုတ်ကိုကျွတ်ကျွတ်အိတ်နဲ့ သောက်နေရပြီတော့...အရပ်ကတို့ ရေ ..
Posted by Andaman Hero at 10:59 AM0comments
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒါဏ်ခံလူထုတွေအတွက်မေလ ၁၀ ရက်နေ့ ကနိုင်ငံ ခြားအကူအညီတွေထိုင်းနိုင်ငံ၊မဲဆောက်ကတဆင့်၊ရန်ကိုမြို့ ကိုပေး
ပေးပို့ တာတွေကတော့၊ရွက်ဖျင်တဲ့ ၁၈၂ လုံးနဲ့ ပလပ်စတစ်ပြားအချပ် ၄ သောင်းကျော်ကိုယူအင်အိပ်ခ်ျစီအာ၊ကဆယ်ဘီးကားနှစ်စီးနဲ့ ပေးပို့ 
ပြီးတော့၊နက်စလေကုမဏီကတော့၊သူတို့ ကုမဏီထုတ်အစားအစာ တွေကားတစီးတိုက်ပေးပို့ ပါတယ်။
မေလ ၉ ရက်နေ့ တုံးကလည်း၊တာခ်ခရိုင်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းက ပစ်ကပ်ကား ၅ စီးတိုက်မုန့် ခြောက်မျိုးစုံကိုပေးပို့ ခဲ့ပါတယ်။
Posted by Andaman Hero at 10:42 AM0comments
အမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ တဖွဲ့ ဟာ၊မေလ ၉ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းမှာ၊ရဟတ်ယာဉ် နှစ်စီးနဲ့ ထိုင်း၊မြန်မာ နယ်စပ်၊မဲဆောက်မြို့ ကိုရောက်လာတယ်။
အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ကြီးဂျက် ဗက်ကာ ကသူတို့ ဟာ၊နယ်မြေအနေအထား၊ လေယာဉ်ပြေးလမ်း၊လေယာဉ်ကွင်းအဆင်းအတက်စတာတွေကိုလေ့လာဖို့ လာ
မေလ ၁၀ ရက်နေ့ မှာတော့ဒီမရိန်းတပ်ဖွဲ့ သူတို့ ထွက်လာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံ အူတဖောင်လေဆိပ်ကိုညနေပိုင်းမှာပြန်ပြီးထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။
Posted by Andaman Hero at 10:39 AM0comments
Posted by Andaman Hero at 10:20 AM0comments
Posted by Andaman Hero at 3:06 PM0comments
Monks help clean in Rangoon
Posted by Andaman Hero at 2:31 PM0comments
Nargis victims waiting for water
Posted by Andaman Hero at 1:38 AM0comments
၁၈ နှစ်မြောက် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ပတ်လည်အခန်းအနား...
အမေရိကန်မရိန်းတပ်ဖွဲ့ တဖွဲ့ ဟာ၊မေလ ၉ ရက်နေ့ ညနေပို...